Caqiidooyinka Dadweynaha ee Camera-Worn Camera | Xalka OMG
Qosol! Kaamirada booliiska ayaa duubaya
Adeegsiga cajaladaha fiidiyowga ee kamaradaha jirka kaliya maahan inay saraakiisha booliiska la xisaabtamaan, laakiin waxay sidoo kale siineysaa qalab waxtar leh oo lagu aqoonsado awoodooda iyo daciifnimadooda. Hirgalintani waxay gacan ka geysan kartaa hagaajinta aaminaadda muwaaddinka iyo xiriirka bulshada ee lala yeesho maamulada maxalliga ah.
Muwaadiniintu kalsooni kuma qabaan hay'adaha mas'uulka ka ah ilaalinta. Ku lug lahaanshaha la sheegay in ay ka mid yihiin booliska degmada iyo dawladda dhexe, iyo sidoo kale ciidanka ee soo dhexgalka kooxdii caadiga ahayd ee waaberigii, ayaan wax ku biirin in meesha laga saaro cabsidaas. Haddii kiisaska jirdilka, baadda, afduubka iyo kufsiga ay booliisku ku tuhmaan tuhmanayaasha ama dambiilayaasha lagu tuhmayo inay ku darsadeen musiibo badan, shaki kama qabno sababta cabsi gelinta muwaadinka.
Laakiin kiisaskaas ku-takri-falka ah ee awood u leh inay soo baxaan iftiinka maahan isha kaliya ee shakiga inaga dhexeysa, ee ku saabsan sida ay u kala sarreeyaan xooggooda amniga iyo cadaaladda. Xiriirka maalinlaha ah ee ka dhexeeya muwaaddiniinta iyo laamaha booliska, xitaa xeryaha gudaha, wuxuu sidoo kale gacan ka geystay kalsooni guud. Caddaynta tan ayaa ah, sida lagu arki karo jaantuskan soo socda, inta u dhaxaysa 2010 iyo 2014, in kabadan boqolkiiba 65 kaqeybgaleyaasha Daraasadda Qaranka ee Dhibbanaha iyo aragtida Amniga Dadweynaha, ayaa soo sheegay heerar yar ama kalsooni darro degmada. iyo booliska transit.
Waxay u fududahay sida gelinta kaameeraha fiidiyowga sarkaalka booliiska. Teknolojiyadda adeegga bulshada iyo, maxaa diidaya, daah furnaanta waxa ku jira iyo in la joojiyo su'aasha la isweydiinayo ee ah boliiska.
Aragtida aaminka ee ku saabsan booliiska
Marka la eego deegaankan oo ah kalsooni darro baahsan, maxaa laga qaban karaa hagaajinta xiriirka ka dhexeeya muwaadiniinta iyo xoogaga nabadgelyadooda?
Ilaa hadda, doodda ku saabsan xoojinta awoodda booliiska maxalliga ah iyo kalsoonida muwaaddiniintu ku qabaan ayaa diiradda saarey taliska booliiska ee keliya.
Si kastaba ha noqotee, waxaa lagama maarmaan ah in la xoojiyo doodaha qaran iyadoo loo marayo doodaha sida ugu wax ku oolsan, wax ku ool ah oo kormeer iyo hufnaan leh oo lagula xisaabtamo xallinta ku-takri-falka awoodda booliiska heer degmo iyo in la wanaajiyo kalsoonida muwaadinka. Soojeedin xiisa leh ayaa ah isticmaalka kaamirooyinka jirka oo u oggolaanaya duubista fiidiyowga ee howlaha maalinlaha ah ee booliiska.
Qolalka jirka ayaa si guul leh looga hirgaliyay dalal badan, iyada oo looga jawaabayo arrimaha aaminaadda iyo kororka musuqmaasuqa iyo ku takri-fal awoodeed ee ka dhex jirta ciidamada booliiska. Dalka Mareykanka, tusaale ahaan, daraasad ay sameysay Madasha Baarasaadka Boliska (waaxda baaritaanka qeybta cadaalada) waxay muujineysaa in isticmaalka kaamirooyinka jirka ay wanaajiyeen daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka kiisaska cabashada muwaadinku iyo aqoonsashada iyo sixitaanka arrimaha gudaha. Sidoo kale, laba qiimeyn oo saameyn ah, oo ku yaal Mesa, Arizona, iyo mid kale oo ku yaal Rialto, California, waxay ku soo gabagabeynayaan in hirgelinta cajaladaha fiidiyowga, iyada oo loo marayo kaamirooyinka jirka, ay yareysey tirada cabashada muwaadinku ka soo horjeedo isticmaalka boqolkiiba 75 iyo boqolkiiba 60, siday u kala horreeyaan. xoogga xad dhaafka ah ee booliska maxalliga ah.
Guud ahaan, caddeynta sayniska ee tikniyoolajiyadan waxay keenaysaa natiijo isku mid ah: waxaa jira saameyn togan oo ku saabsan dhaqanka bulshada ee qofka marka uu dareemo in la arkay. Dareenkan, muwaaddiniintu kaliya maahan inay u qiimeeyaan howlaha ciidamada booliiska laakiin booliisku waxay soo sheegaan wada-xiriir wanaagsan oo ay la yeeshaan muwaaddiniinta kadib hirgelinta kaamirooyinka jirka xiran.
Xalkan ayaa ku lifaaqan baahiyaha macnaha guud, halka kalsooni la'aantu ay tahay mushkilad balaaran. Si kastaba ha noqotee, waxay noqon doontaa khalad aad u weyn oo qaali ah in la keeno tiknoolajiyadda amniga ee guusha leh iyada oo aan la dhisin qaab dhismeedka hay'ad ku filan, ama aan horumarin kaabayaasha saxda ah ee hirgalintiisa.
Si qolalka jirku ay u soo saaraan natiijooyin la cabiro karo oo wanaagsan, sharci dejiyeyaal, taliyeyaasha booliiska iyo muwaadiniintu waa in ay tixgeliyaan talooyinka iyo casharada laga bartay waddamada kale ee fuliyay barnaamijyada noocaas ah.
Khibraddu waxay ina tuseysaa ka hor intaanan soo bandhigin doodda, waa inaan tixgelinno tixgalinta soo socota:
Dhiirrigeli in mas'uuliyiinta inta badan la shaqeeya shacabka ay yihiin kuwa sita kaamirooyinka jirka xiran sababtoo ah waxay awood u yeelan karaan inta ugu badan.
U tabobar saraakiisha booliiska maaraynta jirka ee kaamirooyinka xiran, oo ku saleysan qaab dhismeedka sharciga iyo buugaagta ficil ee booliiska.
Qeex qawaaniinta dhaqdhaqaaqa kaameeradda; tusaale ahaan, markii laga jawaabayo wicitaannada degdegga ah, marka xadgudubyada taraafikada, xiritaanka, kormeerka, wareysiga, iyo silcinnada ay dhacaan. Muwaadinku wuxuu xaq u leeyahay inuu ogaado goorta la duubi doono oo uu dalban karo xuquuqdooda sirta ah kiisaska xasaasiga ah.
Ula xiriir si cad, saraakiisha booliiska, aasaaska iyo borotokoolka sida iyo goorta duubista lagu xisaabtami doono, si looga fogaado in saameyn xun ku yeelato is dhexgalka shaqaalaha.
Abuur koox farsamo oo leh shuruudo cad markay faafineyso macluumaadka, ma aha oo keliya inaad ka fogaato is-miidaaminta xeeladaha amniga laakiin sidoo kale la hubiyo marin u helka macluumaadka iyo daah-furnaanta.
Fidinta awooda kaydinta maxalliga ah, ha noqoto mid dibadda ah ama u maal gashanaya kaydinta dhijitaalka ah ee guryaha.
Samayso siyaasad qaran si loo go'aamiyo dhicitaanka kaydinta cajaladaha fiidiyowga, ee ku saleysan xasaasiga dhacdooyinka la duubay.
Qaad talaabooyin amniga amniga internetka ah oo isticmaal qaabab maadi ah oo qeexaya runta iyo maqnaanshaha khalkhal gelinta duubista fiidiyaha.
Hubso in macluumaadka laga soo aruuriyay kaamirooyinka jirka loo isticmaalo aalad muhiim ah labadaba qiimeynta xeeladaha amniga iyo aqoonsashada aagagga fursadaha.
Samee shuruudo ku saabsan maalgalinta iyo iskuduwida udhaxeysa maamulada degmooyinka, gobolka iyo dowlada dhexe si loo hubiyo joogtaynta maaliyadeed iyo midda hawlgalka ee duubista fiidiyowga.
Waxyaabaha kor ku yaal waa suurtagal illaa inta hirgalkiisu ku saleysan yahay caddeyn adag iyo qaab dhismeedka hay'ad adag. Kaamirooyinka jirka waa qaab kale oo macquul ah oo loo qaadan karo doodaha dib u habeynta booliiska ee hadda jira. Sidan, waxaan qaadi karnaa tallaabo muhiim ah oo looga hortagayo, ma aha oo keliya ku xadgudubka awoodda iyo isticmaalka xad-dhaafka ah ee xoogga laakiin sidoo kale dhacdooyinka ayaa nasiib darro ah.
Caqiidooyinka Dadweynaha ee Camera-Worn Camera ahaa kii ugu dambeeyey: December 2nd, 2019 by admin
2891 Wadarta Views 8 Views Maanta